Sina 1.56 Blue Block HMC Green Coating Optical lens fanamboarana sy orinasa | Hongchen
Lio-mololo: Mazava Diameter: 70mm / 65mm
Index: 1.56 Loko: Green
MOQ: 1 Pair RX Fahitana tokana (SPH & ASP): ASP
RX Lens: misy Form maimaim-poana: misy
Gravity manokana: 1.28 Fanoherana ABrasion: 6-8H
Inona ny index Lens?
Ny fanondroana ny solomaso dia manondro ny fanondroana ny réaction (raha tsy izany dia ny anarana hoe réfractabilité) ny fitaovana ho an'ny solomaso. Izy io dia isa fandrefesana azo ilazana izay mahomby amin'ny famoronan'ilay jiro hazavana. Ny fihenan-jiro dia miankina amin'ny fomba hazavana haingana mamakivaky ilay solomaso.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny 1.56 mid-index sy ny lasopy mahazatra 1.50 dia ny fahavitana. Ny lens miaraka amin'ity index ity dia mampihena ny hatevin'ny 15 isan-jato. Ny sary sy masomaso feno masomaso feno sy vera anaovana hetsika ara-panatanjahan-tena dia mety indrindra amin'ity fanondroana solomaso ity.
Ny fitaovana mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny solomaso dia vera sy resina mafy antsoina hoe CR-39. Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny teknolojia dia misy fepetra takiana bebe kokoa amin'ny solomaso CR39 (optika / plastika) noho ny solomaso solomaso. Mpanamboatra solomaso optika izahay, ary ao anatin'ireto masom-borona ireto, ny masinina fanondroana 1.56 dia iray amin'ireo lantina malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ankoatr'izay, ny lantira miaraka amin'ny index 1,56 dia heverina ho masonkarena mahomby indrindra amin'ny tsena manerantany.
Vokatry ny fahitana: Toy ny solomaso avo lenta, toy ny 1.59, 1.61, 1.67 ary 1.74, ny masinina fanondro 1,56 dia manana sanda ABBE avo kokoa, midika izany fa avy amin'ireo solomaso, afaka mankafy ny traikefa hita maso mahazo aina kokoa ireo mitondra.
Ny jiro manga dia afaka manova ny andronao - manampy amin'ny fanakanana jiro manga manimba amin'ny loharano voajanahary sy artifisialy izy ireo, toy ny telefaona, solosaina findainy, takelaka ary ny masoandro. Indraindray antsoina hoe solomaso solosaina, ny solomaso jiro manga dia afaka mampihena ny fihenjanan'ny maso nomerika sy ny aretin'andoha - tsy lazaina intsony, mitondra anao any amin'ny tsatok'ireo style. Miaraka amin'ny fisafidianana fomba maodely be sy be pitsony, manaova solomaso jiro manga Christopher Cloos tontolo andro, anatiny sy ivelany.
VOKATRA VISION Fahitana tokan-tena
MATERIAL MATERIAL NK-55
savaivony 65 / 70mm
Power Range SPH: -8.00 ~ + 6.00 CYL ： 0 ~ -2.00 HATRANY Hery hafa
Teo aloha: 1.56 sakana manga fisaka bifocal hmc optika ambony
Manaraka: 1.56 manga manakana ny mason-tsarimihetsika hmc mandroso
1.67 Antivirus Blue Block HMC Green Coating Opt ...